Maindasitiri Kuvaka - China Zhenyuan Simbi Simbi Injiniya Co, Ltd.
Maindasitiri emichero anogona kuganhurwa muzvivakwa-zvine storey maindasitiri zvivakwa uye akawanda-storey maindasitiri zvivakwa zvinoenderana yavo yekuvaka mhando mhando.
Iyo yakawanda kwazvo yezvirimwa muzvivakwa zvine akawanda-madura maindasitiri anowanikwa mune akareruka maindasitiri, zvemagetsi, zviridzwa, kutaurirana, mushonga uye mamwe maindasitiri. Pasi pemiti yakadaro kazhinji haina kunyanya kukwirira. Dhizaini yavo yekuvhenekesa yakafanana neiyo yekutsvagisa kwesainzi uye zvivakwa zvema laboratori, uye zvirongwa zvekuvhenekesa magetsi zvinowanzogamuchirwa. Zvigadzirwa zvemuchina mukugadzirwa kwemishini, simbi, machira uye mamwe maindasitiri anowanzo kuve-ane dzimba-dzakavakwa zvivakwa zvemaindasitiri, uye zvinoenderana nezvinodiwa zvekugadzira, akawanda ari akawanda-span single-storey maindasitiri emiti, kureva akawanda-span zvirimwa zvakarongedzwa zvakafanana, uye iyo mapani anogona kunge akafanana kana akasiyana sezvaanodiwa.
Pamusoro pekusangana nezvimwe zvivakwa modulus zvinodikanwa, hupamhi hwechivakwa (hupamhi), kureba uye kukwirira kwechimwe-chevhu chirimwa chakatemwa zvinoenderana nezvinodiwa zvetekinoroji. Span B yemuti: kazhinji 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 36m, nezvimwewo Kureba L kwechirimwa: kushoma semakumi emamita, kusvika mazana emamita. Kureba H kwechirimwa: iyo yakaderera kazhinji ndeye 5-6m, uye iyo yepamusoro inogona kusvika 30-40m kana yakatokwira. Kureba uye kureba kwechirimwa ndizvo zvinhu zvikuru zvinoonekwa mukugadzirwa kwemwenje wemuti. Uye zvakare, zvinoenderana nekuenderera kwekugadzirwa kwemaindasitiri uye zvinodikanwa zvekufambisa kwechigadzirwa pakati pezvikamu, akawanda maindasitiri emichero akagadzirwa nemakirani, iine mwenje wekusimudza huremu hwe 3-5t uye hukuru hwekusimudza huremu hwemazana ematani.
Iyo dhizaini dhizaini yemafekitori chirimwa inogadzirwa zvinoenderana nemamiriro echirimwa. Dhizaini yechirimwa inoenderana nezvinodiwa zvetekinoroji maitiro uye mamiriro ekugadzira uye inosarudza chimiro chemuti.
Dhizaini Dhizaini yeiyo Standard Zvirimwa
I. Dhizaini yezvirimwa zvemabhizimusi inofanirwa kutevedzera marongero akakodzera emunyika, kuzadzikisa tekinoroji yepamberi, kufunga kwehupfumi, kuchengetedzeka uye mashandisirwo, kuve nechokwadi chehunhu, nekusangana nezvinodiwa zvekuchengetedza simba uye kuchengetedza kwezvakatipoteredza.
II. Iyi tsananguro inoshanda kune dhizaini yechangobva kuvakwa, kugadziridzwa uye kuwedzerwa maindasitiri emiti, asi kwete kumakamuri akachena ehupenyu ane mabhakitiriya sezvinhu zvekutonga. Izvo zvinongedzo zveichi chirevo pamusoro pekudzivirira moto, kubvisa uye nzvimbo dzekudzimisa moto hazvishande kune dhizaini yepamusoro-simuka maindasitiri emiti uye epasi pevhu maindasitiri emiti ane kukwirira kwechivako chinopfuura makumi maviri nemana.
III. Paunenge uchishandisa zvivakwa zvepakutanga kugadziridza kwehunyanzvi hwekugadzira, dhizaini yezvigadzirwa zvemabhizimusi inofanirwa kunge ichienderana nezvinodiwa zvehunyanzvi hwekugadzira, kugadzirisa matanho kumamiriro emuno, kuzvibata zvakasiyana, uye kushandisa zvakazara zvivakwa zvehunyanzvi zviripo.
IV. Dhizaini yezvirimwa zvemabhizimusi ichagadzira mamiriro anodikanwa ekumisikidzwa kwekuvaka, kugadzirisa manejimendi, kuyedza uye kushanda kwakachengeteka.
V. Kunze kwekuzadzikiswa kweichi chirevo, dhizaini yezvigadzirwa zvemabhizimusi inoenderanawo nezvinodiwa zvinoenderana nematanho epasirese emunyika.
Chigadzirwa Chekugadzira Chirongwa
Cold Kuchengetedza uye Cold Chain Project